ဆရာများ သင်ခန်းစာအသစ်တင်ရင် ဒီနေရာမှာ&#4 — MYSTERY ZILLION
ဆရာများ သင်ခန်းစာအသစ်တင်ရင် ဒီနေရာမှာ&#4
ကျွန်တော် သင်ခန်းစာအသစ် တင်ထားပါတယ်။
TCP/IP Basics and Scanning Part-2 ပါ။
စမ်းကြဖို့ Application တွေလဲပေးထားပါတယ်။
TCP/IP Basics and Scanning Part-3 ပါ။
Class of IP Address တွေအကြောင်းပါ။
MZ Edu တွင်
အသုံးချ Ruby သင်ခန်းစာ ၂ ကို
ကျန်ရှိသေး သော သင်ခန်းစာ ၂ ၏ အပိုင်းများကို ရေးပြီးပြီးခြင်းဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်။
ကျွန်တော် Pseudo code နဲ့ flow chart စတင်နေပြီနော်။
ကျွန်တော် http://www.edu.mysteryzillion.org ကို၀င်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ....forum ဘက်ပဲ
ရောက်ပြီး edu ဘက်မရောက်တာကြာသွားလို့လားမသိဘူး...အဲလောက်လဲမကြာသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်
ရေးထားတဲ့ အထဲမှာ အကြောင်းရင်းပေါ်ပြီးသားဗျ။ Edu အတွက် လိပ်စာမှာ www မပါဘူးလေဗျာ။ http://edu.mysteryzillion.org ပါ ခင်ဗျား။ :67::67::67:
ကျွန်တော် TCP/IP Basics and Scanning Part-2 ကို edu မှာရှာတာ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဘယ်လို ၀င်၇တယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါဦး.. ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
အားပေးမယ်နော် လုပ်တာလုပ် :d:d:d:d
MrDBA ကိုကိုဒီဘီအေ ကရော.. တစ်ထုထု သင်လေ.. ဘာသင်သင်.
ကျွန်တော် တို ့ကတော ့လေ့လာမှာဘဲ..
MZedu တွင် ခက်သလားဟေ့ Data Base - အပိုင်း ၁ ကိုရေးသားလိုက်ပါသည်။
Database အကြောင်းကို ကွန်ပျူတာနှင့် အိုင်တီ လိုက်စားသူတိုင်း နားစွန်နားဖျားသော်လည်းကောင်း၊ မကြာခဏသော်လည်းကောင်း ကြားဖူးအံ့။ ယနေ့အခါ၊ ကွန်ပျူတာတွင် အလွန်ရှုပ်ထွေးများပြားသော အချက်အလက်များကို သိုမှီး ထိန်းသိမ်းရာ၌ Data Base ကား၊ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ထို Data Base ဆိုသည့်အကြောင်းကို နားလည်လွယ်စေရန် ကြိုးစားရေးသားထားပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကား၊ Database ကို IT သမားများ၊ Software Engineer များ၊ Programmer များ၏ ကိရိယာတစ်ခု၊ ရှုပ်ထွေးပွေလီသော နားလည်ရခက်သည့် အကြောင်းတစ်ခုဟူသော အမြင်မှ၊ ကွန်ပျူတာ အခြေခံရှိသူတိုင်း၊ မိမိ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုများနှင့် တွဲဖက်ကာ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်သည့် ကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်မြင်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဝေဖန် အကြံပေးမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။ ကြိုးစားပါဦးမည်။
Pls let me announced in MZ Facebook
Cheer Up Ko Thar Thar.., I'm also trying to write something deal with Database via the lessons from our school.
နေ့အိပ်မက် ဂျပန်စာစသင်ပေးနေပါတယ်.. ဆရာကြီးမဟုတ်ပါ.. သိသလောက်မျှေ၀ပေးတာပါ..
Jquery စတင်နေပြီနော်။ နေ့တိုင်း update လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်။ ဒါကြောင့် post အဟောင်းကိုပဲ လာဖတ်ပါ။ နောက်ပြီး ကိုသာသာ ရဲ့ ခက်သလားဟေ့ database ကလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ weekend မှာ PHP နဲ့ OOP အကြောင်း သင်ပါမယ်။